I-DXY Bulls Relax Phambi kweMicimbi yeNtengiso, i-FOMC kunye ne-Q2 GDP
26 Julayi 2021 | Ukuhlaziywa: 26 Julayi 2021
Isalathiso sedola ye-DXY yawa kurhwebo lwangoMvulo kwangoko, lisindwa kukunyuka kweemali ezinobungozi, nangona ihlala ikufutshane neenyanga ezintathu ezinesiqingatha zokusetha kwiveki ephelileyo.
Ukonyuka okubanzi kuhlala kungatshintshi, ukurhweba okuzinzileyo ecaleni kuthathwa njengemeko efanelekileyo phambi kwentlanganiso yomgaqo-nkqubo weFed kule veki. Idatha ye-GDP yaseMelika. Imakethi ilindele indawo ethe xaxa ye-hawkish evela kwi-Fed, kunye notshintsho e-verbiage, ebonisa ukuqala kokuncipha ngokuthe ngcembe kwenkxaso yemali, enokuthi yenzeke kwangoko kulo nyaka.
I-DXY yaqiniswa kukuvuselelwa kwezoqoqosho e-US okukhawulezayo, okuya kuba nefuthe kwisigqibo seFed. Uqoqosho lukhule ngeqondo le-8.6% kwikota yesibini, xa kuthelekiswa neepesenti ezi-6.4 kwezokuqala. Kule veki, abatyali mali bazakukhangela iingxelo zengeniso kumashishini aliqela e-S & P 500. Oku kunokuchaphazela ithoni yentengiso.
Iziganeko zeNtengiso: I-FOMC kunye ne-Q2 GDP
Intlanganiso ye-FOMC ngolwesiThathu izakuba liziko leebhanki eziphambili kule veki. Ngaba kuya kuphindwa kubungqina bukaSihlalo weFed uPowell wonyaka weCongress, okanye ngaba amalungu ookhetshe aya kuba nakho ukumcenga ukuba intengiso yabasebenzi yenzile "Uphuculo olongezelelekileyo" kwaye ukucofa kungaqala kungekudala? Ngobuchwephesha titans FB, AAPL, MSFT, AMZN, kunye neGOOGL yokunika ingxelo ngengeniso kule veki, imivuzo iya kuba phambili kwaye iziko.
Umbuzo uya kuba xa ikomiti iza kwazisa iimarike ukuba ukufunyanwa kwamaphepha sele kukufuphi. Iimakethi ziya kwazi kwangoko ngaphambi kokuba i-tapering iqale, ngokuka-Sihlalo weFed uPowell. UPowell wathi kubungqina bakhe bamva nje ukuba urhwebo lomsebenzi alwenziwanga “Uphuculo olongezelelekileyo olunentsingiselo” ukuthethelela ukuthamba. Utshilo ngo-Matshi ukuba kuyakufuneka kubekho uluhlu lweenyanga ezintle zamanani. Ngenxa yoko, ngelixa ukuprinta kukaJuni okungekho kwiFama kuHlawula kwakungu-850,000, ushicilelo oluhlaziyiweyo luka-Meyi lwaluyi-583,000 kuphela (buthathaka kunoko kulindelweyo), kwaye ushicilelo luka-Epreli lwalungu-266,000 kuphela. (buthathaka kakhulu kunokuba kuqikelelwe). Kule veki, i-US izakuxela i-Core PCE, ethathwa njengeyona nto ikhethiweyo ye-Fed yokunyuka kwamaxabiso (nangona ingekho kude kube nguLwesihlanu, emva kwentlanganiso ye-FOMC.)
Igama elithile "Idatha yokuphela kwenyanga" ibhekisa kulwazi oluqokelelwe ekupheleni kwenyanga. Ayizukuhlangana nje kuphela i-FOMC kule veki, kodwa kuya kubakho ukubulawa kwezinye izinto zezoqoqosho ukugcina iso. Silindele ukukhutshwa kwe-US, iJamani, kunye ne-Eurozone Q2 GDP, kunye noTshintsho lokungaSebenzi eJamani, i-CPI yase-Australia kunye ne-US Core PCE.
tags Ixabiso le-US Dollar (DXY)
I-USDCHF iXhasa ukuGcina okuPhezulu kweNqanaba le-0.9000 njenge-US Dollar Index Falls yosuku lwe-3 kumqolo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-ngoFebruwari 23
I-USDCHF iye yagqwesa ngexesha leseshoni yaseYurophu yaphula imiqobo eyaziwayo ngasentla. Esi sibini ivela kumgangatho ophantsi kwinqanaba le-0.8949 Ngelixa igcina ukuqhubela phambili kwayo kudlula kwinqanaba le-0.9000. Okwangoku, i-US Dollar Index (DXY), iphantsi nge-0.1% kusuku emva kokuba inyuke yaya kuma kwi-90.57 yemihla ngemihla kodwa yajika indlela eya kuyo kunye ne-US T-bond isivuno silinganisa iinzuzo zokuqala.
Amanqanaba okumelana: 0.9304, 0.9187, 0.9093
Amanqanaba enkxaso: 0.8950, 0.8870, 0.8757
Emva kokuntywila kwi-0.8949 isibini se-USDCHF senze isindululo kwisigqibo esedlule kwi-0.9000. Ngobuthathaka obubanzi obusekwe kwi-USD buhlala buhleli ngolwe-Lwesibini, isibini sinokuqhubeka nokunyuka siye kwiindawo eziphakamileyo ezintsha. Ukujonga umfanekiso wemihla ngemihla, esi sibini sisaqhubeka nokukhula ngaphakathi kwentshukumo enyukayo emva kokuhla kwayo kwiveki ephelileyo kwinqanaba le-0.8871.
Ukuba isenzo sexabiso sihlala ngaphezulu komgaqo wokunyuka, kukho indawo yokuvavanya isithintelo esikhawulezayo kwangoko kwinqanaba le-0.9045. Ukucoca eli nqanaba liphambili kuya kubona iinzuzo ezongezelelekileyo kwizithintelo ze-0.9093. Ukuba inqanaba lokumisela elichaziweyo libambe, isibini semali sinokubhabha kwaye siphinde sivavanye inkxaso kwi-0.8920.
I-intraday bias kwi-USDCHF ihlala kwindawo ephezulu ngalo mzuzu, nangona kunjalo, urhwebo olusecaleni lunokubonakala. Kwicala elingasentla, ngaphezulu kwenqanaba le-0.9045 linokuqala kwakhona ukulungiswa kwangaphambili ukusuka kwinqanaba le-0.8757. Injongo elandelayo yi-100% ye-0.8757 ukuya kwi-0.9045 ukusuka kwi-0.8870 kwinqanaba le-0.9187.
Okwangoku, kwicala eliphantsi, ulwaphulo lwenqanaba le-0.8870 lunokutshintsha i-bias kwicala eliphantsi le-0.8822 kunye ne-0.8757 yenqanaba eliphantsi. Ixabiso lotshintshiselwano linokufumana inkxaso kumndilili oshukumayo we-5 kunye ne-13 ejikeleze i-0.8970 kunye nenkxaso ethe tyaba kwi-0.8950. Ke, ezinye izinto ezinokubakho ngaphezulu zinokubakho kwintengiso.
6 Disemba 2020 | Ukuhlaziywa: 6 Disemba 2020
Idola yaseMelika iphula iiveki ezintathu ezidlulileyo
23 Novemba 2020 | Ukuhlaziywa: 23 Novemba 2020
Idola yaseMelika iphulwe nje nge-3 yeveki edlulileyo (umgca otyheli) ukuphinda uzame inqanaba le-92.00 kwiseshoni yorhwebo yaseYurophu.
Uxinzelelo lwe-US Dollar bearish lusenzima kula manqanaba kodwa inyani iyayenza okanye iyaphule inqanaba yi-91.75 eyi-20th ka-Septemba kwaye iphantsi kwayo yonke into ukusukela oko i-Federal Reserve yaqala lomjikelo mtsha we-Quantitative Easing Matshi ukujongana nesiphumo sokutshixwa kwesifo seCoronavirus.
Ubume bebonke busemi kwaye imizuzu yangoLwesithathu ye-FOMC inokuzisa iibhere ezingakumbi kwezi marike ukuba ngaba uvakalelo luphuma luphelile kwakhona.